အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: May 2011
Posted by တီချမ်း at 8:34 AM 11 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 8:35 AM5comments: Links to this post
ရက်ပေါင်းများစွာ ပြတင်းက ကိုယ်ကြည့်နေ
လပေါင်းများစွာ အပြင်သို့ အတွင်းကကြည့်
နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘယ်တော့မှ ကိုယ်မတွေးခဲ့
ကိုယ် ဘယ်လောက်အထိ အသိအမြင်မဲ့
အခုတော့ကိုယ် ကြယ်ရောင်များကြားမှာ လင်းနေ
အခုတော့ကိုယ် အရာအားလုံး ကိုမြင်
မြူတွေဟာ ဖယ်ရှားလို့ သွားသလို
ဒါတကယ့် နွေးထွေး အစစ် အလင်း
အရာအားလုံးဟာ အသွင် ရုတ်တရက် အကုန် ပြောင်းပြီ
လပေါင်းများစွာ မှုံဝါး ကိုယ့်ဘဝလေး
နှစ်ပေါင်းများစွာ ထင်ရှင်းပြီး ကိုယ်မတွေ့နိုင်
အခုတော့ သူ ကြယ်ရောင်များကြားမှာ လင်းနေ
သူ့ကြောင့်သာ ကိုယ်အရာတိုင်း အသိတွေလင်း
(ကြည်စင်တဲ့ ကိုယ့် ကမ္ဘာဟာဖြူး)
Posted by တီချမ်း at 11:47 PM2comments: Links to this post
ကိုယ်ငယ်ငယ်တုံးက ကြားဖူးတာပါ။ အရင်ခေတ်တွေတုံးက မိန်းမတွေ အိမ်ထောင်ဘက်ရွေး ကြမယ် ချစ်သူရည်းစားထားကြမယ်ဆိုရင် နံပါတ်တစ် ပထမ ဦးစားပေးတွေဟာ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ အာခီတက်ခ်၊ ဘာညာစတဲ့ ပညာတတ်ယောက်ျားတွေက ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်တွေအဖြစ် နာမည်ကြီးခဲ့ကြပါတယ်။ နောက် ကုန်သည်၊ သူဌေးသား၊ စီးပွားရေး သမား စတာတွေကလဲ အကြိုက်တွေ့စရာတွေပါပဲ။ ဒီလို ပညာတတ် စီးပွားရေးသမား စတာ တွေဟာ မိန်းကလေးတွေအတွက် ကြင်ယာဖက် ရှာစရာသာမက မိဘတွေကလဲ သမက်ဖမ်း ချင်စရာလူမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဟောသူတို့ထက်ပို ရှေ့ ကျရင်တော့ ရှေ့နေ ၊မြို့အုပ်၊ မြို့ပိုင်၊ နယ်ထောက်၊ ဝန်ထောက်၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းအောင်၊ ဘွဲ့ရ စသဖြင့်ပေါ့လေ။ သူ့ခေတ်နဲ့ သူ ဆိုသလိုပေါ့။
ဒီလို ပညာတတ် စီးပွားရေးသမားတွေ ဟာ မိန်းမတွေအတွက် ဘဝ အာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်။ လုံခြုံမှုပေးနိုင်တယ်ပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ ချို့ယွင်းချက်တခုတော့ရှိတယ်။ အဲ့တာက ဘာလဲဆိုတော့….သူတို့တွေက ပညာဂုဏ်၊ ဥစ္စာဂုဏ်မောက်တတ်ကြတဲ့ အတွက် “ရိုမန်တစ်” ဖြစ်မှု အပိုင်းမှာ အားနည်းတာပေါ့လေ။ သူတို့ ရဲ့ပညာဂုဏ် ဥစ္စာဂုဏ်တွေကြောင့်လဲ မိန်းမတွေ ကို သူတို့ထက် တဆင့်နိမ့်တဲ့သူတွေလို့ နှိမ်ချင်စရာ သဘောထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုချို့ယွင်းချက်ကလေးက အသေးအမွှားပါ။ ပိစ်အော့ဖ်ကိတ်ခ်၊ ဒရော့ပ်စ်အောဖ့် ဘီယာပါ ခွင့်လွှတ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိန်းမတယောက်ကို မားမားမတ်မတ်ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်မယ့် ယောက်ျားတွေဟာ အိမ်ထောင်ဦးစီးတွေပါ ရိုမန်တစ်စရာမလိုပါဘူး။ အားကိုး စရာဖြစ်ရင် အိုကေပါပြီ။
သိပ်မကောင်းပေမယ့် အရင်ခေတ်တွေတုံးက ဝတ္ထုရှားလို့ ကမ္ဘာ့ ဂန္တဝင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂျိန်း အော်စတင် (Jane Austin) ရဲ့ မာန နဲ့အာဂါတ (Pride and Prejudice) ထဲမှာ အဓိက ဇာတ် လိုက် မင်းသမီး အဲလစ်ဇဘက်ကို သူတို့ရဲ့ အကို ဝမ်းကွဲဆွေမျိုး နီးစပ်တော်တဲ့သူက အိမ်မှာ လာတောင်းတော့ အဲလီဇဘက်က သူ မချစ်ပါဘူးဆိုပြီး ငြင်းလိုက်တဲ့ သူကို ပိုက်ဆံရှိတယ်၊ လယ်တွေ မြေတွေပိုင်တယ် မိသားစု အတွက် ဘဝအာမခံချက်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာလေး တချက်ထဲနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းမလေးက ချက်ချင်း ကောက်ယူပစ်လိုက်ပါတယ်။
* ထားပါတော့ ကိုယ့်အတွေးအခေါ်တွေတောင် ရာစု တော်တော်များများ ခေတ်နောက်ပြန် ပြန် ဆွဲနေပြီ။ တနေ့က ရုပ်ရှင်ချန်နယ်တခုမှာ ပြန်ပြလို့ ကြည့်မိရင်း တွေးမိတာတွေပါ။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများစုမြင်နေရတာတွေကို ရေးချင်တာလဲဖြစ်တယ်။
ဂျိန်းသာ ခုထိ ရှိနေအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဝတ္ထု ကိုတမျိုးပြောင်းရေးရတော့မှာဘဲ လို့ တွေးမိလို့ ပါ။ မဟုတ်ရင်လဲ ဂျူးတို့ ဘာတို့လို မိန်းမဝါဒီ လို့ နာမည်အတပ်ခံရတဲ့ စာရေးဆရာမတွေ က ပြန်ပြင်ရေးသင့်နေပြီ။
ခေတ်သစ်ယောက်ျားတွေ လို့ ခေါ်ရမယ့် မောင်တို့ ၂၁ ရာစုနှောင်းယောက်ျားတွေဟာ ပညာ တွေလဲ အများကြီး တတ်ချင်မှတတ်တော့မယ်၊ ငွေတွေလဲအများကြီးရှာ နိုင်ချင်မှ ရှာနိုင်မယ်၊ ရာထူး ဂုဏ်သိမ်တွေလဲ ကြီးကြီးမားမား ရှိချင်မှ ရှိတော့မယ်၊ ယောက္ခမတွေ တွေ့တာနဲ့ ကိုယ့် သမီးတွေအတွက် သွားရည် တမြားမြား ကျချင်စရာယောက်ျားမဟာတွေလဲ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ် တော့မယ်။
ခုခေတ်သစ်ယောက်ျားတွေဟာ သိပ်သိပ် စန်းစန်းတင့် (sensitive) ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အား ငယ်တဲ့ တခြမ်း ကိုဖော်ထုတ်ပြဖို့လဲ တယ်ဝန်မလေးကြတော့ဘူး။ ယောက်ျား နှင့် မိန်းမသည် တန်းတူဖြစ်သည်။ ထုို့အတွက်ကြောင်း အိမ်ထောင့်တာဝန်တွေကို မိန်းမတွေသည်လဲ တန်းတူ ညီမျှ သာတူညီမျှ ပါဝင်ထမ်းရွက်သင့်သည်၊ ထမ်းရွက်ရမည်။ မောင်တထမ်း မယ်တရွက်ခေတ် မဟုတ်တော့။ မောင်ကတထမ်းဆိုရင် မယ်ကလဲတထမ်းပဲ ဆိုပြီး ဂျဲန်ဒါ (Gender) စင်စတိုက် (Gender sensitize) လုပ်ထားတဲ့ ခေတ် ဂျဲန်ဒါ မိန်းစတရမ်း (gender mainstream) လုပ် ထားတဲ့ ခေတ်ကိုရောက်နေပါပြီ။
နောက်ပြီး ခေတ်သစ်ယောက်ျားတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အတွက် တွက်တတ်ပြီးတော့ အတ္တလဲကြီးကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရည်းစား တွေကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဖို့ အတွက်လဲ အားပေးတတ်ကြပါသေးတယ်။ တကယ်ပါ ကိုယ်မြင်နေရတာ များပြီ။ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ စားကြ သောက်ကြ ပြီးရင် မိန်းကလေးတွေကို ရှင်းခိုင်းတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေက အများစု၊ အဲ့လိုမှ မဟုတ်သေးရင်လဲ အမေရီကန် စစ်စတမ် (American system) ဆိုပြီးတော့ ကိုယ့်အား ကိုယ် ကိုးကြေး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရှင်းကြေး ဆိုပြီး မိန်းမတွေကို တန်းတူနေရာပေးတတ်နေကြပါသေးသည်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလေစွ။ ပြီးတော့ ပိုဆိုးတာက အဲ့လိုတွေ လုပ်ရဲနေလျက်က အိမ်ထောင်ဦးစီး အိမ်ဦးနတ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ် ကိုလိုချင်နေသေးသည်။ ခေတ်သစ်ယောက်ျား အများစု သည် အလုပ်ကိုသာ လက်ကြောတင်းအောင်မလုပ်ချင်လျှင်နေမည် ခုနပြောတဲ့ အိမ်ဦးနတ်ဂုဏ်ကိုတော့ လိုချင်ကာ အခန့်သား နေရာယူချင်ကြသည်မှာ ခေတ်ကြောင့်ပဲလား..ဘာလား ဝေခွဲရန်ခက်ခက်လှချေတော့။
တကယ်ပါ အရင်ခေတ်ယောက်ျားတွေဆိုရင် ရှက်လို့ လဲသေမယ့် အနေအထားတွေကို အခု ခေတ် ယောက်ျားတွေက အပြုံးမပျက်လုပ်နေနိုင်ပြီလို့ ကိုယ်ပြောရင် ကိုယ့်ကို တဘက်သတ် စွပ်စွဲတယ် ပြောတယ် လို့ မပြောပါနဲ့။
အရင်းစစ်တော့လဲ အမြစ်မှာ ပေါ်တယ်ဆိုသလို တကယ်တော့လဲ တချိန်လုံး တန်းတူ အခွင့် အရေး လိုချင်လွန်းလို့ တိုက်ယူချင်နေကြတဲ့ တိုက်ယူခဲ့ကြတဲ့ ကိုယ်တို့ မိန်းမတွေ အပြစ်ပါပဲ။
ဒီလိုခေတ်သစ်ယောက်ျားတွေ ပေါ်ပေါက်လာတာဟာ တကယ်တော့ ကိုယ်တို့ ခေတ်သစ်မိန်းမ တွေကလဲ စွမ်းလွန်းလာတာပါပါတယ်။ သမီးရည်းစားကြားမှာ အိမ်ထောင်တွေကြားမှာ ဦးစီး ဦးဆောင် ဟာ မိန်းမတွေ ဖြစ်လာကြပါပြီ။ အခု ခေတ်သစ်ယောက်ျားတွေ ရဲ့ ရည်းစားတွေ က ဆရာဝန်မတွေ၊ ရှေ့နေမတွေ၊ ပညာတတ်မိန်းမတွေ၊ ဘီးဇစ်နက်စ် ဝိုးမန်းတွေ ဖြစ်ကုန် ကြပြီ လေ။ ကဲ ကိုယ်ပြောတာ ဟုတ်သလား မဟုတ်ဘူးလား စာဘတ်သူပဲ ဆုံးဖြတ်ပါလေ။
ကိုယ်လေးစားသော စာဘတ်သူတယောက်က ဒီအပို်ဒ် ကို ဝေဖန်ထားတယ် ကိုယ်ရေးချင်တာ ကို မရောက်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ပြန်ပြင်ပါအုံးမယ်
Posted by တီချမ်း at 8:36 AM 14 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 3:32 PM 10 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 7:43 PM 8 comments: Links to this post
Love last as lust
I thought I love
Might be I wrong?
I look I found
But now what’s wrong
The like was gone
So was it love
Or like I asked
I found just lust
What my friend said was true…
Posted by တီချမ်း at 6:38 PM3comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 9:10 AM7comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 5:46 AM 16 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 12:46 AM7comments: Links to this post
မင်းဆီမှာ တို့ ကျဆုံးနေပါပြီလေ
Posted by တီချမ်း at 11:53 PM No comments: Links to this post
ပုံပြင်လေး တပုဒ် ပြောပြချင်ပါတယ်......ဘယ်သူ့ ကိုမှလဲ မရည်ရွယ်ပါဘူး တိုက်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ တည့်တည့်ပြောတယ် မှတ်ပါ။
ကိုယ်တို့ရဲ့ ချစ်သူ ရည်းစား မောင်တို့ ယောက်ျားများ တခါတခါ ချိုးတတ်တဲ့အချိုးပါ
မမေ့ရက်ဘူး အချစ်ဦး(ဟောင်း)ရယ် လုပ်နေတာပေါ့.... ကြုံဖူးကြလား အရင် ရည်းစား ကို မမေ့နိုင်တာလေ....ဒီလိုဖြစ်လာတိုင်း မကောင်းဘူး လို့ပြောလို့ မရပါဘူး။ တီချမ်းသုံးသပ်တာ ကို အရင်နားထောင်ကြည့်ပါအုံး.....နော်.....စိတ်ကို နည်းနည်းလျော့.........
“ဘာလို့အဲ့ကောင်မ ကို မမေ့နိုင်သေးတာလဲ” လို့ ဒေါသသံနဲ့ မဆူပါနဲ့။
“ကျမ က ဘာလဲ သူ့ ရဲ့ အစားထိုးလား” လို့ မနာလိုစိတ်ပျင်းပျင်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ် မပြောပါနဲ့။
“ကျမ အတွက်ကော ဘယ်လို စဉ်းစားထားလဲ....ကျမ အပေါ် မတရားဘူး လို့ ရှင် မသိဘူးလား အခုထိ သူ့ကို မမေ့နိုင်သေးတာ....” လို့လဲ...ဝမ်းနည်းခံစား အမေးမပွားပါနဲ့။
ချစ်တယ်ဆိုတာနဲ့သတိရတယ်ဆိုတာ ရောမပြောသင့်တဲ့ ကိစ္စ နှစ်ခုပါ။ သပ်သပ်ဆီပါ။ ဒါကို နားလည်ထားရမယ်။
ယောက်ျားတွေ အရင်ရည်းစားဟောင်း ကိုမေ့မရဘူးဆိုတာ...တကယ်တော့ အရင် ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေထဲမှာ သူက သူမ ကို နာကျင်ခံစားစေခဲ့ဘူးလို့ ပဲ ဖြစ်ရမယ်။ အဲ့ဒီတုံးက ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို သူပြန်ပြီး မပေးဆပ်နိုင်ခဲ့သလို ပြန်ပြီးလဲ အစားထိုးမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်တုံးက သူက ငယ်သေးတယ် မိန်းမတွေရဲ့ သဘောကိုလဲ မစောကျောမိသေးဘူး။ နားမလည်သေးဘူး။ ပြီးတော့ ဒီတယောက်နဲ့ လွဲသွားခဲ့ရင်လဲ သူ့မှာ အခွင့်အရေးတွေ နောက်ထပ်ရှိအုံးမယ်လို့ ငယ်ဂုဏ်တက်နေသေးတဲ့ အချိန်ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေလဲ ကုန်သွားခဲ့ပြီ...သူဘေးက မိန်းမတွေလဲ တယောက်ပြီးတယောက် ပြောင်းသွားခဲ့ပြီ...သူလဲ တဖြည်းဖြည်း ရင့်ကျက်လာပြီ (သေချာသတိပြုပါ စာဘတ်သူများ တီချမ်း သူလဲ တဖြည်းဖြည်း အသက်ကြီးလာပြီ လို့ မရေးပါဘူး ရင့်ကျက်တာ နဲ့ အသက်ကြီးတာ မတူတာကို သဘောပေါက်စေချင်တာပါ) ဘဝ မှာလဲ ဒုက္ခ သုက္ခ တွေ တော်တော်များ ကြုံ ခဲပြီးပြီ ဘဝအကြောင်းနားလည်လာပြီပေါ့.....ဒီအခါမှ ရုတ်တရက် သူ နားလည်သဘောပေါက်လာတာက အရင်ရည်းစားဟောင်းအပေါ်သူလွန်ခဲ့တာတွေ အများကြီး ပါလားဆိုတာ ကိုပေါ့။
ဒါပေမယ့်လည်း အချိန်တွေက နှောင်းသွားခဲ့ပြီ.... သူ့ စိတ်ထဲမှာ နောင်တတွေနဲ့ ပဲ ကျန်ရစ်ပြီး သူ့ ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ သူမဆီပြန်မသွားနိုင်တော့ဘူး။ သူတို့တွေ ဝေးကွာခဲ့ပြီ ဘဝတွေ ကွာခြားခဲ့ပြီ။ သူ့ အရင်ရည်းစားဟောင်းကို ပြန်သွားမရှာနိုင်တော့ဘူး ...ဒီအချိန်မှာ သူလုပ်နိုင်တာ တခုပဲ ရှိတော့တယ် အဲ့တာကတော့ သူမကို သတိရတာပါပဲ။ သူမ ကို သတိရခြင်းနဲ့ သူ့ ရဲ့အပြစ်တွေကို သတိရနေစေခြင်းအားဖြင့် သူ့ကိုယ်သူ ဒဏ်ပေးနေတော့တာပေါ့။
ယောက်ျားတွေက သူတို့ရဲ့ရည်းစားဟောင်းတွေအပေါ် အပြစ်ရှိနေသလို ခံစားနေရမှ...အခု လက်ရှိ သူ့ မျက်စိရှေ့ က မိန်းမ ကို ပို တန်ဖိုးထားတတ်မှာ။ ဒါမှ သူ့ဘေးက လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ မိန်းမကို ပိုပျော်အောင်ထားလိမ့်မယ်။ သူ့ကို တကယ်ချစ်တဲ့ နောက်မိန်းမတယောက်ကို နာကျင်အောင် မလုပ်သင့်တော့ဘူးဆိုတာ သူ ပိုသိလာမယ်။ နောက်တခါ အချစ်ဆိုတာ ကို ထပ်ရှာဖို့ သူ အချိန်မပေးနိုင်တော့သလိုထပ်တွေ့ဖို့လဲ မလွယ်တော့ ဘူးလို့ သူနားလည်လာမယ်။ တကယ်လို့ သာ သူ့ ရှေ့ က မိန်းမ ကို နောက်ထပ်တခါ နာကျင်အောင် လုပ်မိရင် သူ့ဘဝ တလျောက်လုံး နောက်ထပ်ဆပ်လို့ မကုန်မယ့် အပြစ်တွေပိုပိုများလာတော့မယ်။
ရည်းစားဟောင်းပေါ်မှာ တင်နေတဲ့ အပြစ်တွေ မှန်သမျှကို လက်ရှိ ရည်းစား ဒါမှမဟုတ် မယား အပေါ်မှာ ပိုပြီးပေးဆပ်တော့မယ်လေ။ ကဲ အဲ့တာဆိုရင် သူ့ အရင်ရည်းစားဖြစ်ရတာထက် ခုလက်ရှိ ရည်းစားဖြစ်ရတာ က ပိုကောင်းမယ် မဟုတ်လား.....? ပိုပြီးတော့လဲစိတ်ချမ်းသာမယ်လေ။
အမှားရှိမှ အမှန်ပြင်နိုင်မယ်။ အမှားကို ကြောက်မှလဲ ပိုချစ်တတ် တန်ဖိုးထားတတ်လာမယ်လေ။ သူသာ တကယ်လုို့ မမှားခဲ့ဘူးဆိုရင် လက်ရှိတယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းကို ကော အခုလောက် ချစ်တတ်ပါ့မလား....?
Posted by တီချမ်း at 4:22 PM7comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 3:42 PM 12 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 4:42 AM2comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 6:04 PM5comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 7:20 PM5comments: Links to this post